Vaovao - Ny fanafarana sy fanondranana any Shina ao anatin'ny roa volana voalohany amin'ity taona ity dia mihoatra lavitra noho ny andrasana amin'ny tsena
Ny fampidirana sy fanondranana entana any Shina tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ity taona ity dia nihoatra lavitra noho ny nandrasana tamin'ny tsena, indrindra hatramin'ny 1995, araka ny angon-drakitra navoakan'ny General Administration of the Customs tamin'ny 7 martsa. manondro fa ny fampidirana an'i Shina amin'ny toekarena manerantany dia nihalalina hatrany. Notaterin'ny Reuters fa nahavita nifehy ny valan'aretina i Shina, ary nitohy ny baiko ho an'ny fitaovana fanoherana ny valanaretina any ivelany. Ny fampiharana ny fepetra fitokanana any an-trano any amin'ny firenena maro dia nateraky ny fipoahan'ny fangatahana entana an-trano sy ho an'ny mpanjifa elektronika, izay nahatonga ny fisokafan'ny varotra ivelany an'i Shina tamin'ny 2021. Na izany aza, nanipika ihany koa ny fitantanan-draharaha ankapobeny fa ny toe-karena manerantany dia sarotra sy mafy, ary mbola lavitra ny lalan'ny varotra ivelany any Sina.
Ny taham-pitomboana haingana indrindra amin'ny fanondranana hatramin'ny 1995
Araka ny angon-drakitra momba ny fitantanan-draharaha ankapobeny ny ladoany, ny sandan'ny sandan'ny importa sy ny fanondranana entana any Chine tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ity taona ity dia 5,44 trillion yuan, fiakarana 32,2% raha oharina amin'ny fe-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Anisan'izany ny fanondranana dia 3.06 trillion yuan, tafakatra 50,1%; import dia 2,38 trillion yuan, niakatra 14,5%. Ny sandam-bola dia ao amin'ny dolara amerikana, ary ny sandan'ny sandan'ny import sy export dia nitombo 41,2% tao anatin'ny roa volana lasa. Anisan'izany ny fanondranana nitombo 60,6%, nitombo 22,2% ny fanafarana, ary nitombo 154% ny fanondranana tamin'ny volana feb. Nasongadin'ny AFP tamin'ny tatitra nataony fa io no tahan'ny fitomboana haingana indrindra amin'ny traikefa fanondranana an'i Shina hatramin'ny 1995.
Ny ASEAN, EU, Etazonia ary Japon no mpiara-miombon'antoka efatra lehibe ao Shina hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny febroary, miaraka amin'ny tahan'ny fitomboan'ny 32,9%, 39,8%, 69,6% ary 27,4% amin'ny RMB. Araka ny fitantanan-draharaha ankapobeny momba ny ladoany, ny fanondranan'i Shina tany Etazonia dia 525,39 miliara yuan, ny 75,1 isan-jato tao anatin'ny roa volana lasa, raha ny ambim-barotra niaraka tamin'i Etazonia dia 33,44 miliara yuan, fiakarana 88,2 isan-jato. Tamin'io vanim-potoana io ihany tamin'ny taon-dasa, ny fanafarana sy ny fanondranana teo amin'i Sina sy Etazonia dia nidina 19,6 isan-jato.
Amin'ny ankapobeny, ny ambaratonga import sy export an'ny China ao anatin'ny roa volana voalohany amin'ity taona ity dia tsy mihoatra ny fe-potoana lasa tamin'ny taon-dasa ihany, fa nitombo 20% teo ho eo raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2018 sy 2019 talohan'ny fipoahan'ny. Huojianguo, filoha lefitry ny Fikambanana Fikarohana momba ny varotra manerantany ao Shina dia nilaza tamin'ny fotoana manerantany tamin'ny 7 martsa fa ny fanafarana sy ny fanondranana any Shina dia nitotongana tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ny taon-dasa noho ny fiantraikan'ny valanaretina. Miorina amin'ny fototra somary ambany ihany, ny angon-drakitra manafatra sy manondrana amin'ity taona ity dia tokony hanana fahombiazana tsara, saingy ny angon-drakitra navoakan'ny Fitantanan-draharaha ankapobeny ny ladoany dia mbola nihoatra ny nandrasana.
Ny fanondranana any Shina dia nirongatra tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ity taona ity, taratry ny fangatahana mafy manerantany ho an'ny entona vita, ary nahazo tombony tamin'ny fihenan'ny toby noho ny fihenan'ny toekarena tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa, hoy ny fanadihadian'i Bloomberg. Ny fitantanan-draharaha ankapobeny momba ny ladoany dia miharihary fa ny fanafarana varotra any ivelany sy ny fitomboan'ny fanondranana any ivelany ao anatin'ny roa volana voalohany dia miharihary fa “tsy malemy amin'ny vanim-potoana”, izay manohy ny fitomboana haingana hatramin'ny volana jona tamin'ny taon-dasa. Anisan'izany ny fitomboan'ny fangatahana any ivelany ateraky ny famerenana amin'ny laoniny ny famokarana sy ny fanjifana ny toekarena eropeana sy amerikanina ka nahatonga ny fitomboan'ny fanondranan'i Sina.
Fisondrotana manan-danja amin'ny fampidirana ireo akora fototra
Ny ekonomia eto an-toerana dia mihatsara hatrany, ary ny PMI amin'ny indostrian'ny mpamokatra dia eo amin'ny sehatry ny fanambinana sy malazo mandritra ny 12 volana. Ny orinasa dia mihevitra kokoa ny zavatra antenaina amin'ny ho avy, izay mampiroborobo ny fanafarana faritra miharo, vokatra azo avy amin'ny angovo toy ny faritra miharo, ny vy ary ny solika. Na izany aza, ny fiovaovan'ny vidin'ny vokatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny sokajy isan-karazany dia miteraka fiovana lehibe amin'ny vidin'ireto entam-barotra ireto rehefa manafatra azy ireo i Shina.
Raha ny angon-drakitra notantanan'ny Fitantanan-draharaha ankapobeny ny fadin-tseranana, tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ity taona ity dia nanafatra vy 82 tapitrisa taonina i Sina, fiakarana 2,8%, ny salan'isan'ny vidin'ny fanafarana 942,1 yuan, niakatra 46,7%; ny solika nafarana avy any ivelany dia nahatratra 89,568 tapitrisa taonina, fiakarana 4,1%, ary ny salan'isan'ny vidim-panafarana dia 2470,5 yuan isan-taonina, nihena 27,5%, ary niafara tamin'ny fihenan'ny 24,6% ny totalin'ny entana nampidirina.
Nisy fiatraikany teo amin'i Sina ihany koa ny fihenjanana famatsiana puce eran-tany. Araka ny fitantanan-draharaha ankapobeny momba ny fadin-tseranana, nampiditra faribolana mitentina 96,4 miliara i Sina tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny sandan'ny 376,16 miliara yuan, miaraka amin'ny fiakarana lehibe 36% sy 25,9% ny isany ary ny vola raha ampitahaina aminy. vanim-potoana tamin'ny taon-dasa.
Mikasika ny fanondranana, noho ny tsy fahitana ny valan'aretina manerantany tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa, ny fanondranana fitaovana sy fitaovana fitsaboana any Chine tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ity taona ity dia 18,29 miliara yuan, fitomboana lehibe 63,8% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Ankoatr'izay, satria i China no nitarika ny fanaraha-maso mahomby ny COVID-19, dia tsara ny fanarenana sy ny famokarana finday, ary nisondrotra tampoka ny fanondranana finday, kojakojan-tokantrano ary fiara. Anisan'izany ny fanondranana telefaona finday nitombo 50%, ary ny fanondranana fitaovana sy fiara an-trano dia nahatratra 80% sy 90% avy.
Huojianguo dia namakafaka tamin'ny vanim-potoana manerantany fa nanohy nanatsara ny harinkaren'i Shina, namerina ny fahatokisan-tena amin'ny tsena ary nivoatra ny famokarana orinasa, noho izany dia nitombo be ny fividianana akora fototra. Ankoatr'izay, satria mbola miparitaka hatrany ny toe-trangan'aretina any ivelany ary tsy azo averina amin'ny laoniny ny fahaiza-manao, dia mbola mitana ny toeran'ny toby famokarana manerantany i Shina, manome tohana matanjaka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny valanaretina erantany.
Mbola ratsy ny toe-draharaha ivelany
Ny fitantanan-draharaha ankapobeny ny ladoan'ny China dia mino fa ny varotra ivelany any Shina dia nanokatra ny varavarany tao anatin'ny roa volana lasa izay nanokatra fanombohana tsara nandritra ny taona iray. Mampiseho ny fanadihadiana fa ny baiko fanondranana orinasa orinasam-panondranana sinoa dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy, mampiseho ny fanantenana amin'ny toe-javatra fanondranana ao anatin'ny 2-3 volana ho avy. Mino i Bloomberg fa ny fanondranana haingana an'i Shina dia nanampy tamin'ny fanohanana ny fanarenana an'i Shina tamin'ny valan'aretina V ka nahatonga an'i Shina ho firenena tokana mitombo amin'ireo toekarena lehibe manerantany amin'ny taona 2020.
Tamin'ny 5 martsa, ny tatitra momba ny asan'ny governemanta dia nanambara fa ny tanjona kendren'ny firoboroboana ara-toekarena an'i Shina ho an'ny 2021 dia mihoatra ny 6 isan-jato. Nilaza i Huojianguo fa nitombo be ny fanondranana an'i Sina tao anatin'ny roa volana lasa satria ny fanondranana dia tafiditra ao anatin'ny harin-karena faobe, nametraka fototra mafy orina hanatrarana ny tanjona iray taona.
Ny pnemonia coronavirus vaovao dia miparitaka erak'izao tontolo izao koa, ary mitombo ny antony tsy marin-toerana sy tsy azo antoka amin'ny toe-javatra iraisam-pirenena. Sarotra sy mafy ny toe-karena manerantany. Ny varotra ivelany any Shina dia tsy mitsaha-mitombo. Huweijun, talen'ny toe-karena Sinoa ao amin'ny Macquarie, andrim-panjakana ara-bola, dia maminavina fa hitombo ny firoboroboan'ny fanondranana any Shina ao anatin'ny volana vitsivitsy amin'ity taona ity satria manomboka manohy ny famokarana indostrialy ny firenena mandroso.
"Ny antony manimba ny fanondranana an'i Shina dia mety aorian'ny fifehezana ny tranga areti-mifindra dia averina amin'ny laoniny ny fahafaha-manerantany ary mety hiadana ny fanondranan'i Shina." Ny fanadihadiana nataon'i Huojianguo dia nilaza fa satria firenena mpamokatra lehibe indrindra manerantany mandritra ny 11 taona misesy, ny rojom-pandrosoana indostrialy ao Shina ary ny fahombiazan'ny famokarana tena mahomby dia tsy hahatonga ny fanondranana any Shina hiova be amin'ny 2021.